महाकवि देवकोटा : बिखर्चीदेखि मासुका सौखिनसम्म
नेपाल लाइभ शनिबार, कात्तिक २९, २०७७, १४:४६
महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटासँग मेरो भेट विशेष सन्दर्भमा भएको थियो। उहाँलाई आफ्ना कृतिहरु सार्ने मान्छे चाहिएको रै’छ। मेरो अक्षर निकै राम्रो थियो। उहाँले यस्तो राम्रो अक्षर भएको मान्छे त म खोजिरहेको थिएँ भन्नुभयो। मैले म सेवा गरिहाल्छु नि भनेँ।
देवकोटाजी नेपाल भाषानुवाद परिषदका जागिरे लेखक हुनुहुन्थ्यो। उहाँले नै मलाई त्यहाँ जागिर मिलाइदिनुभयो। मैले मासिक ३० रुपैयाँ तलब पाउँथेँ। उहाँको तलब चाहिँ ८० रुपैयाँ थियो। पूर्णप्रसाद बाह्मण लगायतका अरु केही लेखक पनि अनुवादकका रुपमा जागिरे थिए। नाम भाषानुवाद भए पनि प्रायः सबै लेखकले मौलिक ग्रन्थ नै लेखे। पूर्णप्रसाद छोटा कथा लेख्नुहुन्थ्यो। देवकोटाजी महाकाव्य लेख्नुहुन्थ्यो।
त्यहाँ जागिर गरेपछि देवकोटाजीका कृतिहरु साफी गर्ने काम गर्न थालेँ। भाषानुवाद परिषद्को कार्यालय हालको घन्टाघरभन्दा अगाडि थियो। त्यहाँ साहित्यकारहरु जम्मा भइरहन्थे। त्यसैले धेरै लेखकहरुसँग मेरो भेटघाट र चिनजान भयो।
त्यस क्रममा ‘शारदा’ पत्रिकालाई पनि सघाउन पुगेँ। त्यहाँ पनि लेखक-कविहरुसँग सरसंगत भयो। त्यो सरसंगतले मलाई पनि लेखक बन्न प्रेरणा दियो र आफू पनि लेख्न थालेँ। लेखेर देवकोटालाई देखाउँथेँ। उहाँ राम्रो छ, राम्रो हुँदै गएको छ, लेख्दै गर भन्नुहुन्थ्यो।
देवकोटाजी यस्ता थिए, उस्ता थिए भनेर अनेक अफवाह फैलाइएको पाइन्छ। तलब थापेको दिन बाटोमा बाँड्दै हिँड्थे, आफ्नो कोट नै फुकालेर गरिबलाई दिन्थे भन्ने जस्ता चर्चा चलेको पाइन्छ। यस्तो कुरा मैले पनि सुनेको हुँ। तर, कोटै फुकालेर दिएको थाहा छैन। एक-दुई जनाले यत्तिकै फर्माएर भनेको हो कि जस्तो लाग्छ। वास्तवमा उहाँको जीवनमा पैसाको दुःखै थियो।
उहाँ प्रायः भनिरहनुहुन्थ्यो, ‘पैसै पुगेन, घर चलाउन एकदम गाह्रो पर्‍यो।’
देवकोटाजी जागिर गर्नुका साथै घरैमा ट्युसन पढाएर पनि अलिअलि पैसा कमाउनुहुन्थ्यो। अंग्रेजी भाषामा उहाँको पकड राम्रो थियो। विद्यार्थीले सय रुपैयाँको दरले ट्युसन फी दिन्थे।
एक बाजि छोरीको बिहे गराउनुभयो। मुश्किल पर्‍यो भनेर भाषानुवादमा आफ्नो समस्या राख्नुभयो। उहाँलाई बिहे खर्च स्वरूप पाँच सय रुपैयाँ सहयोग दिइयो।
एक पटकको घटना म निकै सम्झिन्छु। उहाँले तलब थापेको एक दिन पैसा मैले बोकेको थिएँ। नोट नभई सिक्कैसिक्का गह्रुंगो हुने भएकोले मैले सघाएको थिएँ। सँगै उहाँको घर (धोबीधारा) तिर जाँदै थियौं, बाटोमा घर नजिकैको फलफूल पसलमा उहाँ रोकिनुभयो।
पसलको एउटा कुनामा मेवाको रास थुपारिएको थियो।
उहाँले सोध्नुभयो, ‘यो मेवा एउटाको कति पर्छ?’
पसल्नीले देवकोटालाई बडो उपेक्षाको भावले हेरी। उसले रुखो स्वरमा भनी, ‘यो मेवा बेच्नका लागि होइन!’
म झसंग भए। यत्रो ठूलो लेखकलाई पनि उसले चिनिन, मेवा किन्न खोज्दा पनि पत्याइन, सिल्ली जस्तै ठानी भन्ने लाग्यो। देवकोटालाई कतिपयले सिल्ली भन्थे।
देवकोटाले नाटक पनि लेख्नुभयो। डिल्लीबजारको नाटक मण्डलीमा म काम गर्थेँ। नाटक मण्डलीले देवकोटालाई नाटक लेख्न दिएको थियो। मण्डलीका सञ्चालकले देवकोटाको धेरै काम हुन्छ, नाटक छिटो लेखाउन तिमी ताकेता गर्दै गर भनेर मलाई अह्राएका थिए।
मैले देवकोटा कहाँ गएर ताकेता गरे जस्तो गरेँ। उहाँले ‘भरत विलाप’ भन्ने नाटक लेखेर दिनुभयो। उतिबेला राणाजीको ढोका अगाडि अस्थायी रंगमञ्च बनाएर नाटक देखाइन्थ्यो।
घ्यू कमिला जस्ता मसिना अक्षर
म उहाँलाई देवकोटाजी भनेर बोलाउँथेँ। उहाँ मलाई श्याम भन्नुहुन्थ्यो। कृति सार्ने क्रममा तुकबन्दी मिलेन भने म मिलाइदिन्थेँ। एक-दुई शब्द फेरबदल गरिदिन्थेँ। त्यो देखेर उहाँ श्यामले यहाँ अर्को शब्द थपिदिएछन्, सपार्न खोजेछन् भन्नुहुन्थ्यो। केही गाली गर्नुहुन्नथ्यो।
उहाँको अक्षर मसिना थिए, घ्यू कमिला जस्तै। तर, स्पष्ट बुझिने खालका थिए। शब्द लेख्दा डिको नदिईकनै लेख्नुहुन्थ्यो। धाराप्रवाह लेख्न सक्ने खुबी थियो। कहिलेकाहीँ उहाँले बोल्ने र त्यही अनुसार मैले लेख्ने पनि गरियो। तर, त्यसो गर्दा उहाँको सोचाइ र बोलाइमा बीचमा अल्झो खडा भयो। त्यस्तो अलमल हुने गरेपछि भैगो मैं आफैं लेख्छु भनेर खुरुखुरु लेख्नुहुन्थ्यो।
लेखक हुनलाई अन्तरभाव जाग्नुपर्छ। बोलेर अरुमार्फत लेखाउँदा त्यो अन्तरभाव जगाउनतिर ध्यान दिने कि बाहिर बयान गर्ने भन्नेमा सामञ्जस्य नमिल्दो रै’छ।
उहाँको कृति मैले शुद्ध रुपमा सारेपछि त्यो पाण्डुलिपि छाप्नका लागि प्रेसमा पठाइन्थ्यो। त्यतिबेला प्रेस धेरै थिएनन्। किताब छाप्ने प्रेस ऋद्धिबहादुर मल्लको जोरगणेश प्रेस नै थियो। किताब छाप्ने बेला म पनि हेर्न जान्थेँ।
देवकोटाको सबै कृति मैले सारेको होइन। मुख्य गरी ‘शाकुन्तल’ महाकाव्य, ‘तुषार वर्णन’ काव्य र अरु केही सारेको हुँ। अरु कतिपय कृति उहाँकै लेखोट प्रेसमा पुगेर सोझै पनि छापिन्थ्यो।
देवकोटाको बढ्ता मिहिनेत परेको कृति 'शाकुन्तल' नै हो। मलाई पनि त्यही बढ्ता मन पर्छ।
देवकोटाजी मिजासिलो हुनुहुन्थ्यो। जोसित पनि नरम भएरै व्यवहार गर्ने। कसैलाई कडा शब्द प्रयोग गर्नुहुन्नथ्यो। सबैलाई बराबर मन पराउनुहुन्थ्यो। बरु यसो गरौं, उसो गरौं भन्नुहुन्थ्यो।
मुख च्यापच्याप गरेर घन्टौं बोलिरहनुहुन्थ्यो। बोल्नुपर्‍यो भने बोलिरहने। एक-दुई वटा सभामा उहाँले बोल्नुभएको मलाई सम्झना छ। सरस्वती सदनमा साहित्य सम्मेलन पनि उहाँले साहित्यबारे धाराप्रवाह बोल्नुभएको थियो।
वास्तवमा देवकोटा एकसुरमा लागिरहने स्वभावका हुनुहुन्थ्यो। बसेर घोप्टो परेर लेखिरहनुहुन्थ्यो। अगाडि जे भेट्यो, त्यसैलाई साधन बनाएर लेख्ने गर्नुहुन्थ्यो। अरु प्रपञ्च र लप्पनछप्पन केही पनि आउँथेन। लेखन कर्म नै उहाँको मुख्य ध्याउन्न रह्यो। त्यही लेखन कार्यले उहाँलाई देश-विदेश पनि पुर्‍यायो। महाकाव्य लेखेको हुनाले उहाँलाई महाकवि भनिएको हो। कुनै औपचारिक पद दिइएको होइन।
हिउँ परेको राति मासु खाएर खण्डकाव्यको सिर्जना
खानपानमा देवकोटाको विशेष सौख थियो। त्यसमा पनि मासु भनेपछि हुरुक्कै हुनुहुन्थ्यो। एक बाजि काठमाडौंमा हिउँ पर्‍यो। म देवकोटाको धोबिधारास्थित घरमा बसिरहेको थिएँ। हिउँ परेपछि देवकोटाजीले श्रीमतीसँग भन्नुभयो, ‘मलाई त मासु खान मन लाग्यो बज्यै!’
म त्यस्तै १८/२० वर्षको ठिटो थिएँ, मासु म ल्याउँछु नि त भनेर फूर्तिसाथ अघि सरेँ। त्यस्तै पाँच रुपैयाँ जति लिएर मासु पसल खोज्दै हिँडेँ।
हिउँ परेको बेला त्यस्तो जाडोमा कसले पसल खोल्ने ! खोज्दै जाँदा एउटा पसल खुलेको देखेँ, अगाडि मासु राखेर जाडोमा हात चपक्क बाँधेर पसले बसिरहेका थिए। मासु किनेर देवकोटाको घरमा बुझाइदिएँ।
त्यो देखेर बज्यैलाई आश्चर्य लागेछ। उहाँले मायालु पारामा झपार्नुभयो, ‘यस्तो हिउँ परेको बखतमा हिँड्न हुन्थ्यो ? रुखको हाँगा भाँच्चिएर लाग्न सक्थ्यो। कस्तो विचित्रको काम गरेको यो!’
बाजे मासु खाने भन्ने, बज्यैले चाहिँ विचारै नगरीकन बाहिर निस्कियो भनेर कराउने ! म चाहिँ उतिबेला मासु खान्नथेँ।
हिउँ परेको त्यही राति उहाँले ‘तुषार वर्णन’ भन्ने काव्य लेख्नुभएछ। मासु खाएको फल, खण्डकाव्य जन्मियो ! खसीको मासुभन्दा पनि अझ टाउको मन पर्थ्यो देवकोटालाई। टाउकोको रस खान रुचाउनुहुन्थ्यो।
तस्बिर : फ्लिकर डटकम
(नेपाल लाइभ अर्काइभबाट। प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७४ कार्तिक २ बिहीबार।)